dimanche, 24 mai 2020 16:59
Toamasina: Dokotera hifa faty nihantona tao amin’ny hopitaly manarapenitra
Mpitsabo tonga hanao fizaham-pahasalamana tao amin’ny efitra nisy azy ny marainan’ity Alahady 24 may 2020 ity no nahita fa nisaringotra tamin’ny tadina seraoma ny tendan’ilay dokotera. Nifarimbona an’ity farany ireo mpiasan’ny fahasalamana nanao vonjy aina saingy indrisy fa tsy avotra intsony.
HJRA Ampefiloha: Natokam-ponenana ny mpitsabo, mpiasa ary ny marary rehetra ao amin’ny sampana mitsabo ny homamiadana
Mikatona nanomboka ny 11 may 2020, sady tsy mandray marary no tsy manao asam-pitsaboana ny service Oncologie, itsaboana ireo olona voan’ny homamiadana ao amin’ny HJRA Ampefiloha. Tsy mbola voafaritra ny fotoana hisokafany indray. Misy ny Naoty manamafy izany.